နှင်းဟေမာ: တတိယအကြိမ်မြောက် ဆမ်ဘားဝမ်း( ဓမ္မဥယျာဉ်မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း) တန်ဆောင်တိုင် ကထိန်အလှူတော်
တတိယအကြိမ်မြောက် ဆမ်ဘားဝမ်း( ဓမ္မဥယျာဉ်မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း) တန်ဆောင်တိုင် ကထိန်အလှူတော်
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ ( 25 Oct 2009 ) ရက်နေ့က နှင်း ရဲ့ ဆရာများက ဆမ်ဘားဝမ်း ဆရာတော်ဘုရားထံ ကထိန်သင်္ကန်း သွားရောက် လှူဒါန်းကြမည်ဟု အကြောင်းကြားလာသဖြင့် အိပ်ယာထ အလွန်ပျင်းသော နှင်း တစ်ယောက် နံနက်စောစော အိပ်ယာမှထကာ နှင်း တို့ အိမ်နှင့် မလှမ်းမကမ်း၌ တည်ရှိသော ဓမ္မဥယျာဉ် မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း သို့ သွားရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်....။
အဲဒီ့နေ့က စကာင်္ပူနိုင်ငံ စင်္ကာပူမြို့ Sembawang ဓမ္မဥယျာဉ် မြန်မာ ဘုန်းကြီးကျောင်း၌ ဆရာတော်ဘုရား နှင့် သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တို့အား စင်္ကာပူရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာမိသားစု တို့ ပေါင်းစု၍ ကထိန် သင်္ကန်းနှင့် လှူဖွယ်ဝတ္ထုအစုစုတို့ကို လှူဒါန်းဆက်ကပ်ကြပြီးနောက် ၊ ကထိန်အလှူတော် အောင်ပွဲအခမ်းအနားကိုလည်း ဓမ္မဥယျာဉ်ကျောင်း အနီးရှိ Sembawang ကမ်းခြေ ၌ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပ ခဲ့ကြပါတယ်..။
ဓမ္မဥယျာဉ်ကျောင်း ဆရာတော်ဘုရားအား အမှူးပြု၍ အလှူရှင်မိသားစု များမှ စတုဒီသာ မြန်မာ့ရိုးရာ မုန့်ဟင်းခါး ၊ အုန်းနိုးခေါက်ဆွဲ ၊ ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ ၊ သာကူ ၊ လုံးစေ့ကျောက်ကျောဖျော်ရည် ၊ ခေါက်ဆွဲသုတ် ၊ ကြာဇံဟင်းခါး စသည့် စတုဒီသာ အစုံအလင်တို့ဖြင့် ရောက်လာသူအားလုံးတို့ကို တစ်နေကုန် ဒါနပြုကြပါတယ်...။
ဆမ်ဘားဝမ်း ကမ်းခြေကို ဘတ်စ်ကားရပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပဲ မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်းသံ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်တီးလုံးသံကိုကြားလိုက်ရတော့ ချက်ချင်းပဲ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက်သွားသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ် ...။
အနီးနားရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ပင်လယ်ကမ်းစပ်အနီး ဇာတ်စင်ထိုးပြီး စင်ပေါ်မှာလည်း
မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်းကြီးကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ ရင်ထဲမှာ အရမ်းကို ပျော်သွားမိတယ် ...။
ဆိုနေကြတဲ့ သီချင်းတွေကလည်း ချမ်းမြေ့ပါစေ ၊ ဇေယျာကမ်းအလှပန်းချီ ၊ ငယ်ကျွမ်းဆွေ ၊ အရဟံဂုဏ်တော် စတဲ့ မြန်မာတေးသီချင်းကြီး တွေနဲ့ အားပါးတရ ဖျော်ဖြေကြပါတယ် ...။
နားထောင်လို့လဲ အရမ်းကောင်းသလို စင်္ကာပူရောက်မြန်မာတွေရဲ့ အနုပညာအရည်အချင်းတွေကိုပါ သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်...။
ပရိတ်သတ်တွေ ရိုးအီမသွားရအောင် ကြားဖြတ် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်လေးတွေပါ ထည့်ထားပါတယ် ...။
ဆရာတော်ဘုရားက ကထိန်အလှူရှင်တွေအတွက် ပထမဆု Laptop Computer ၊ ဒုတိယဆု LCD TV ၊ တတိယဆု DVD Player နဲ့ စတုတ္ထဆု Digital Camrea ၊ ပဉ္စမဆု လန်ကာဝီ ခရီးစဉ် ၂ ညအိပ် ၃ရက် နဲ့ နှစ်သိမ့်ဆုများအဖြစ် တစ်နှစ်စာ စင်္ကာပူနိုင်ငံထုတ် သဇင်မဂ္ဂဇင်း စာအုပ်များ ၊ မသီရိ ( သီရိ အလှပြင်ဆိုင် ၊ Peninsula Plaza ) ကလဲ Hair Cut Free လက်မှတ်မြောက်များကို စပွန်စာ ပေးခဲ့ပါတယ်...။ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဘာမဲမှ မပေါက်ခဲ့ပေမယ့် သူများတွေ မဲတွေပေါက်တာကိုကြည့်ရတာလဲ အရမ်းပျော်စရာကောင်းနေခဲ့ပါတယ် ....။
အစီအစဉ်တွေအားလုံးထဲမှာတော့ အထူးခြားဆုံးက အငြိမ့်ကဏ္ဍလေးပါပဲ လူရွှင်တော်တွေ ၊ အငြိမ့်မင်းသမီးတွေနဲ့ ဆိုင်းဆရာ စိန်မြစန်း အဖွဲ့ လိုက်ဖက်ညီညီ ကတာတွေကို ကြည့်ရတာ တစ်ကယ့် မြန်မာပြည်က အငြိမ့်တွေလိုပါပဲ ....။ အငြိမ့်မစခင်မှာ ကတဲ့ ရွှေအိုးစည်အကလေးကိုတော့ နှင်း တော်တော်လေး သဘောကျမိတယ်...။ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလေး နှစ်ယောက်ကပြဖျော်ဖြေကြတာဖြစ်ပါတယ်...။
အားလုံးကြည့်လို့ရအောင် Video ရိုက်လိုက် ချက်ချင်း Youtube မှာလှမ်းတင်လိုက်နဲ့ နှင်း လဲ တော်တော်အလုပ်ရှုပ်သွားပါတယ် .. ပါးစပ်ကပြောတော့ အချိန်မရှိလို့ဆိုပြီး အဲဒီ့နေ့က ပြန်ရအောင်လို့ခေါ်တာကို မရလို့ နှင်းကို လက်လျှော့ပြီး နှင်းတို့ တစ်ဖွဲ့လုံး တစ်နေကုန်အောင် ထိုင်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်...။
ကိုဖိုးစိုင်း နဲ့ မနန်းမေသက်အေး တို့ရဲ့ ရွှေအိုးစည် အက
မနှင်းဝေေ၀ ရဲ့ တစ်ပင်တိုင်အကအလှ
အဲဒီ့နေ့က အလှူရှင်တွေလဲ ဒါနမြောက်သွားရအောင် အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲက ၂ ပွဲ ၊ ခေါက်ဆွဲသုတ် ၁ပွဲ ၊ မုန့်ဟင်းခါး ၁ပွဲ၊ ဆီချက် ၁ပွဲ ၊ အအေး ၂ ခွက် ၊ ရေသန့်၂ ပုလင်း ၊ တစ်နေကုန် မပြန်မချင်း အားပေးလာခဲ့ပါတယ်...။ ဗိုက်အရမ်းတင်းနေတာနဲ့ သာကူ မစားခဲ့ရဘူး .. အိမ်ပြန်ရောက်လို့ ဗိုက်ချောင်သွားတော့မှပဲ ဓါတ်ပုံလေးတွေ ပြန်ကြည့်ပြီး သာကူမစားခဲ့ရလေခြင်းဆိုပြီး နောင်တတွေတစ်လှေကြီး ရနေသေးတာ ..ဟီး ...း) ။အလှူလုပ်တဲ့အခါ လန့်ပြီးမဖိတ်ပဲ မနေကြနဲ့ဦးနော်...။ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲက အရမ်းကောင်းလို့ နှစ်ပန်းကန်စားပစ်လိုက်တာ နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ ကောင်းကောင်းမထနိုင်တဲ့အပြင် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကလဲ အကြောညှပ်သွားပါတယ် ...။ နောက်ဆုံးတော့ နှင်းဟေမာ တစ်ယောက် လုံးဝမထနိုင်တော့လို့ ရုံးတစ်ရက် နားလိုက်ရပါတော့သတည်း .....းp
Posted by မင်္ဂလာပါ .... at 10:33 PM
အော် နောက်ဆုံး အရင်းအမြစ်က အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲစားလို့ ဖြစ်တာကို များ လာပြီး အစ်ကို လာချွဲနေသေးတယ်....။ ဟင်းးးးးးးး( ပြောတော့ဖြင့် အားမရှိလို့ ခေါင်းအကြောညပ် တယ်ထင်လို့ကို လတ်ဆတ်သတ်တော့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကြောင့်ကိုး...။ ဟင် မပြောတော့ပါဘူး ဖြစ်တာတောင် နည်းသေး.... :(
မမက ဘယ်မှ သိပ်မသွားတတ်ဘူး။ ညီမလေးတင်ပေးမှပဲ ကြည့်ရတော့တယ် ။
ညီမလေး ပြောသလို ဆိုင်းဝိုင်းမြင်ရလို့ တော်တော်အံ့သြဝမ်းသာသွားတယ် ညီမလေးရေ....
တင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါရှင် =)
မရောက်ဖြစ်လိုက်ပါဘူး အစ်မရေ။ အခုလို ဓါတ်ပုံတွေနဲ့တွေ့ ရတော့ ကျေးဇူးပါခင်ဗျ။
ဟဲ့ ပလုတ်တုတ် ဓာတ်ပုံထဲ ပါကုန်ပါပြီ
ရှေ့ဆုံးတန်းမှာ အ၀ါရောင် စပို့ရှပ်လေးနဲ့က
ဧရာသီတာတို့ရဲ့ သားကြီး သြရသ ရေချမ်းပါရှင့်
ကုသိုလ်လုပ်တာတွေ မြင်ရတွေ့ ရတာ အလှုရှင်
တွေကိုယ်စား ကြည်နူးဝမ်းသာမိပါတယ်ဗျာ . . .
နှင်းရေ ပျော်စရာကြီးနော် မုန့်တွေလည်းစားရတယ်။ မြန်မာအကတွေလည်း အလွမ်းပြေကြည့်ရတယ်။ ညီမလေးလည်း ကုသိုလ်အများကြီးရသွားတယ်ပေါ့.နော.
အဲဒီနေ့က ဘုန်းဘုန်းက ဖိတ်ထားတာကို မအားလို့ မသွားလိုက်ရဘူး လေ.. ဟင့်... နိုချင်တယ် နိုချင်တယ်...း(
ဘယ်ရမလဲ တီနှင်းဆီမှာ အ၀စားပီး အငြိမ့်ကို ထိုင်ကြည့်သွားတယ်....
ဒါတောင် သာကူမစားခဲ့ရလို့ ဝမ်းနည်းနေတယ်ပေါ့
တတိယအကြိမ်မြောက် ဆမ်ဘားဝမ်း( ဓမ္မဥယျာဉ်မြန်မာဘုန်းေ...
“တစ်ခါတစ်လေမှာ ဒီသီချင်းလေးတွေကို ညည်းတက်တယ်”
လမုန့်ပွဲတော်အမှတ်တရ နှင့် လတ်တလောအခြေအနေ